Iinkalo ezibalulekileyo nezibalulekileyo malunga noJames Monroe
UJames Monroe wazalelwa ngo-Ephreli 28, 1758 kwi-Westmoreland County, eVirginia. Wanyulwa umongameli wesihlanu wase-United States ngo-1816 waza wathatha isikhundla ngo-Matshi 4, 1817. Ezi zilandelayo zizinto ezilishumi ezibalulekileyo ezibalulekileyo ukuqonda xa ufunda ubomi nobongameli bakaJames Monroe.
Uyise kaJames Monroe wayengumsekeli okhuselekileyo wamalungelo ekoloni. UMonroe waya kwiKholeji kaWilliam noMary eWilliamsburg, Virgina, kodwa waphuma ngo-1776 ukuba ajoyine i-Continental Army kwaye alwe kwi-Revolution yase-American. Waphuma eLieutenant waya eLieutenant Colonel ngexesha lemfazwe. Njengoko uGeorge Washington wathi, "wayenamandla, osebenzayo kwaye oqiqayo." Wayebandakanyeka kwiimeko ezininzi eziphambili zemfazwe. Wawela iDelaware kunye neWashington. Walimala waza wanconywa ngobungqina kwi- Battle of Trenton . Emva koko waba ngumncedisi-kwikampu eNkosini uTrrrling waza wakhonza phantsi kwakhe e- Valley Forge . Walwa kwiiMfazwe zaseBrandywine naseGermantown. KwiMfazwe yaseMonmouth, wayeyi-scout eWashington. Ngomnyaka we-1780, uMonroe wenziwa ngumkhomishana wamajoni waseVirginia ngumhlobo wakhe kunye nomcebisi, uGrandon uGrusta Thomas Jefferson.
Ummeli woLwazi lokuLungisa amalungelo aMazwe
Emva kwemfazwe, uMonroe wakhonza kwiContinental Congress. Wayenomdla ngokuqinisekileyo ukuqinisekisa ukuba amalungelo 'athi. Emva kokuba uMgaqo-siseko wase - US ucetywayo ukuba uphinde ufake iNqaku leNkomfa , uMonroe wayekhonza njengomthunywa kwikomiti yokuqinisekiswa kweVirginia. Wavota ngokuchasene nomgaqo-siseko ngaphandle kokufakwa kweBhili yamaLungelo.
Idiplomate eFransi Ngaphansi kweWashington
Ngo-1794, uMengameli waseWashington wamisela uJames Monroe ukuba abe ngumphathiswa waseMerika eFransi. Ngoxa wayekho, wayeyintloko ekufumaneni uThomas Paine ejele. Wayecinga ukuba iUnited States imele ixhase ngakumbi iFransi kwaye ikhunjulwe kwisithuba sayo xa engazange ayixhase ngokugcwele isivumelwano sikaJay neBritish Great.
Uncedwe ukuthetha ngokuthengwa kweLouanaana
UMongameli uThesham Jefferson ukhumbula uMonroe kumsebenzi wezopolitiko xa wamenza umthunywa okhethekileyo eFransi ukukunceda uxoxisane ne- Louisiana Purchase . Emva koko, wathunyelwa eBrithani enkulu ukuba abe ngumbingeleli apho ukusuka ku-1803-1807 njengendlela yokuzama ukuyeka ukunyuka kobudlelwane obuya kugqiba ekupheleni kweMfazwe ka-1812 .
NguNobhala WeeNkcubeko kunye neMfazwe kuphela
Xa uJames Madison waba ngumongameli, wamisela uMonroe ukuba abe nguNobhala weSizwe ngo-1811. NgoJuni, ngo-1812, i-US yavelisa imfazwe eBrithani. Ngowe-1814, abaseBrithani beye bahamba eWashington, DC Madison wagqiba ukubiza igama lika-Monroe uNobhala weMfazwe eyenza umntu oyedwa ukuba abambe izithuba zombini ngexesha. Womeleza umkhosi ngexesha lakhe kwaye wanceda ukuzisa ukuphela kwemfazwe.
Ngokugqithiseleyo Won Ukhetho lwe-1816
I-Monroe yayithandwa kakhulu emva kweMfazwe ka-1812. Yayiwunqoba ngokukhawuleza ukutyunjwa kweDemocratic-Republican kwaye yayingenakuphikiswa kancinci kummeli we-Federalist uRufus King. Eyaziwayo kakhulu kwaye iphumelele ngokuphumelela ukutyunjwa kwe-Dem-rep and ukhetho lwe-1816. Uphumelele ukhetho malunga no-84% wamavoti okhetho .
Kwakungekho Mchasene Kukhetho lwe-1820
Ukhetho lwe-1820 lwaluhlukile kulokuba kwakungekho nxamnye noMongameli Monroe . Wamkela onke amavoti okhetho ukonga omnye. Oku kwaqala oko kuthiwa " Era yeemvakalelo ezilungileyo ."
Ngomhla kaDisemba 2, 1823, ngexesha loMongameli uMonroe umyalezo wesibhozo wonyaka kwiNgqungquthela, wadala i- Monroe Doctrine . Oku kungengombuzo omnye wemfundiso ebalulekileyo yelizwe langaphandle kwimfundiso yase-US. Ingongoma yomgaqo-nkqubo yayikukucacisa kwiintlanga zaseYurophu ukuba kwakungekhokho ikoloniyoni yaseYurophu nakwiimerika okanye nayiphi na ingozi kwilizwe elizimeleyo.
Imfazwe yokuqala yeSininole
Kungekudala emva kokuthatha isikhundla ngo-1817, uMonroe kwafuneka ahlangabezane neMfazwe yokuqala yeSininole eyayisukela ngo-1817-1818. AmaNdiya aseSininole ayewela umda we-Florida owawuqhutywe eFlorida kunye neGeorgia. Jikelele u- Andrew Jackson uthunyelwe ukujongana nale meko. Akayithobeli imiyalelo yokubakhupha eGeorgia kwaye endaweni yoko yahlasela iFlorida, iphosa igosa lombutho apho. Emva koko kwakuquka ukutyikitywa komnqophiso we- Adams-Onis ngo-1819 owawunika iFlorida eMelika.
Ukwahlukana kwaba ngumcimbi ophindaphindiweyo e-US kwaye uya kuba yinto ekupheleni kweMfazwe Yomphakathi . Ngomnyaka we-1820, i- Compromise yaseMissouri yadluliselwa njengomzamo wokulondoloza umlinganiselo phakathi kwamakhoboka kunye namahhala. Ingqamathelo yalesi senzo ngexesha likaMonroe e-ofisi liza kubamba iMfazwe Yomphakathi iminyaka embalwa.
Kutheni uLee Harvey Oswald abulale iJFK?
Indlela yokongeza ifowuni yokuprinta okanye ikhonkco kwiwebhsayithi yakho
Iyintoni iSityalo kwiSifundo sezoQoqosho?
I-Meteotsunamis: iiTsunamis ezibangelwa yiMozulu
Ukufezekisa iNgxowa-mali yakho